Ingane itholakale kwi-trunk seyonakele - Ilanga News
Home Izindaba Ingane itholakale kwi-trunk seyonakele
Ingane itholakale kwi-trunk seyonakele
Ibivakashele uyise okuthiwa uthi yawa embhedeni ilele
IMINWE ikhomba ngaku-yise wengane ngokutho-lakala kwesidumbu
somntwana wentombazane obenezinyanga eziwu-18 ubudala sesiqala ukonakala sivalelwe epotimendeni (trunk) lezingubo ngaphandle komuzi
kayise ngoMsombuluko emini.
Isidumbu sikaSnothando Manyoni waseKwazini, eKrans-kop, sitholakale sesonakele nga-phandle komuzi kayise abemva-kashele. Ilanga linqume ukuwa-godla amagama kayise kaSnotha-ndo ngezizathu zomthetho.
Ngokuthola kweLANGA ngonina omdala kaSnothando, uNkz Sli-ndile Manyoni, ingane ilandwe nguyise wayo ekupheleni kuka-Nhlaba (May) ngoba igula, ezoyihambisa kudokotela kwazise uni-na wayo, uNkz Phumlile Manyoni (24) ubengenayo imali yokuyela-pha.
Uthi uyise wengane ube esecela ukuba ingane isale seyihlala amasonto ambalwa, imvakashele, ngenxa yokuthi ubesenesikhathi ayigcina, bangaba nankinga nalo-kho.
Uthi unina wengane uthole ito-ho eThekwini ekuqaleni kuka-Nhlangulana (June), wakhululwa nguyise wengane ukuthi ahambe, ingane ihleli kahle, bazoyigada.
“Besihlale simfonela uyise we-ngane sicela ukukhuluma nayo, asitshele ukuthi uyivakashise
kudadewabo ohlala eMgungundlovu. Bekuthi uma sicela inombolo kadadewabo anqabe, asitshele ukuthi ihleli kahle ingane, masikhululeke.
“Sonke lesi sikhathi besazi ukuthi ingane ihleli kahle kwa-anti wayo, singasazihluphi nangokuthi simfonele ngoba ubengafuni si-xhumane nayo,” kusho uNkz Manyoni.
Uthi bethuke kwaphela nasozwaneni ngoMsombuluko bethola ucingo lubatshela ukuthi maba-phuthume kubo kayise wengane, sekwenzeke umonakalo, kuthola-kale isidumbu sikaSnothando si-valelwe epotimendeni, eseshonile.
Uthi babe sebeshayela uyise ka-Snothando bembuza ngale ndaba, wabatshela ukuthi ubesaba ukubatshela ukuthi ingane isishonile.
“Usitshele ukuthi kwenzeke umonakalo, ubeyishiye yodwa endlini ilele. Uthe ngesikhathi ilele ishayeke ngobuso yashona.
“Usitshela ukuthi isishonile ube esethatha isinqumo sokuyivalela kuleli potime-nde ngoba ubesaba ukuthi asibikele ngokwenzekile,” kusho uNkz Manyoni.
Kuthiwa indaba ibhoboke emuva kokuba izingane ebe-zidlala egcekeni zilivulile ipotimende, zazithela phezu kwesidumbu sikaSnothando sesonakele, iphunga seligqa-bula ikhala.
ILANGA lithole ukuthi nge-sikhathi kutholakala lesi si-dumbu, uyise wengane ube-ngekho, esesibhedlela eli-mele kanzima ngemuva ko-kuklajwa yintombazane ya-sendaweni.
UNkz Manyoni obekhuluma naleli phephandaba ku-zwakala ukuthi uphoxekile, ukhale ngokuthi kabazi
ukuthi bazothathani bahla-nganise nani ukuze bayifihle njengoba besele nodadewabo bo-babili, bezipatanisela njengoba sebashonelwa ngabazali.
“Udadewethu ubejabule ukuthi ingane ihleli kahle kuyise kanti akazi ukuthi seyishonile. Sinemi-buzo eminingi esingazi ukuthi
izophendulwa ngubani ngokufa kwengane njengoba uyise
esesibhedlela. Siyafisa ukuba aphume azositshela iqiniso nga-kho konke okwenzekile kuze ku-shone ingane.
“Yize besazi ukuthi uhlala ne-nkosikazi yakhe abanezingane nayo ezicishe zilingane noSnotha-ndo kodwa besingazitsheli ukuthi uyithatha nje ngeke isabuya iphila. Siyafisa ukuthola uxhaso nga-bazosisiza ukuba sifihle ngesizotha ingane kadadewethu njengoba singenamali,” kubalisa uNkz Manyoni.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhe-le, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi amaphoyisa avule idokodo lophenyo ngokushona kwengane. Uthi nakuba uyise wengane ese-sibhedlela, ubatshele ukuthi inga-ne iwe embhedeni ilele yodwa.
“Sisalinde umphumela kadoko-tela wokuhlolwa kwesidumbu ozositshela ukuthi ingane ibulawe yini,” kusho uCol Mbhele.
Previous articleabalandeli bayifuna ikwamasipala namuhla imeya
Next articleUyazisola ngokushiya iKaizer Chiefs